China 8 Axis Robotic ịgbado ọkụ Workstation na abụọ positioner Manufacturer na Supplier | Yunhua
Olee otú dịkwuo arụmọrụ nke robot na-arụ ọrụ? Tinye otu tebụl ọrụ ọzọ ga-abụ usoro dị irè. Onye ọrụ ahụ ga - ahọrọ mpempe ọrụ na tebụl na - arụ ọrụ ma robot ga - agbado na tebụl ọzọ na - arụ ọrụ ka robot wee nwee ike ịgbanye ọrụ ọrụ.
Lọ ọrụ ịgbado ọkụ nke 8 Axis na-arụ ọrụ abụọ nwere otu ọkwa ọkọlọtọ. Mgbakwunye mpụga ọzọ nwere ike ịmekọrịta na robot nke mere na robot nwere ike ịmechaa ụfọdụ ngwa mgbagwoju anya. A pụkwara ịkpọ ọkwa abụọ a na-arụ ọrụ na tebụl ma enwere ike ịchịkwa ya site na igbe nchịkwa. Ozugbo onye ọrụ rụchara ọrụ idozi ya ma pịa igbe ntanetị. Robot ga-aga ịgbado ọkụ okpokoro a mgbe ị mechara nke gara aga. Anyị nwere ike ijikọ ọwa ọcha ojii nke bụ aka maka ịgbado ọkụ ọwa.
YOO HEART ụlọ ọrụ nwere ike inye ndị ahịa okwu dị iche iche nke nnyefe. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụzọ ụgbọ mmiri site n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku dị ka mkpa ngwa ngwa. YOO obi robot nkwakọ ikpe nwere ike izute oké osimiri na ikuku ibu chọrọ. Anyị ga-akwadebe faịlụ niile dị ka PL, akwụkwọ asambodo, akwụkwọ ọnụahịa na faịlụ ndị ọzọ. Onwere onye oru ya nke oru ya bu n’aka na enwere ike inye ndi robot n’odu ahia n’enweghi nsogbu n’ime ubochi iri abuo.
Ọ bụla ahịa kwesịrị ịma YOO HEART robot ọma tupu ha azụ ya. Ozugbo ndị ahịa nwere otu robot YOO HEART, onye ọrụ ha ga-enwe ọzụzụ ụbọchị 3-5 n'efu na ụlọ ọrụ YOO HEART. A ga-enwe weChat otu ma ọ bụ whatsapp otu, ndị ọrụ aka anyị bụ ndị na-ahụ maka ire ere, ọkụ eletriki, ngwaike, ngwanrọ, wdg.
Q1. Gịnị bụ ihe dị iche na positioner achịkwa plc na site akara usoro.
A. Nsogbu kasịnụ bụ ma ọ bụrụ na PLC na-achịkwa ọnọdụ, ọ nwere ike ịkwaga naanị site na ọnọdụ gaa n'ọzọ ọzọ, robot enweghị ike ijikọ na ọnọdụ (mmekọrịta). mgbe ị na-eji sistemụ njikwa, ọ nwere ike imekọrịta na positioner. N'ezie, ha nwere nsogbu dị iche iche na teknụzụ.
Q2. Etu esi ejikọ okpokoro-edozi?
A. Ugbu a, anyị nwere 22input na 22 mmepụta. Naanị ịkwesịrị ịnye akara na valvụ electromagnetic.
Q3. Have nwere ọwa ọkụ ebe ọrụ gị?
A. Anyị nwere ọwa ọcha ọcha na-arụ ọrụ ebe. Ọ bụ ihe nhọrọ.
Q4. Etu esi ejikọ ọkụ ọkụ dị ọcha na otu esi eji ya?
A. You ga enweta akwụkwọ ntuziaka maka ọwa ebe ọkụ dị ọcha. Naanị ị ga - enye akara iji gbanye ebe dị ọcha na ọ ga - arụ ọrụ.
Q5. Kedu ụdị akara ngosi ọwa dị mkpa ọkụ?
A. Enwere akara 4 dịkarịa ala, ọkụ ọkụ dị ọcha dị mkpa: ịcha akara nke waya, mgbaàmà mmanụ ịgba, mgbaàmà nhicha, na akara ngosi.
Nke gara aga: Laser ịgbado ọkụ robot
Osote: 7 Axis Robotic Arc ịgbado ọkụ Workstation